Fialana sasatra 3 amin'ny vanim-potoana fialantsasatra 2015 hanampy anao amin'ny 2016 | Martech Zone
Fialantsasatra 3 amin'ny vanim-potoana fialantsasatra 2015 hanampy anao amin'ny 2016
Talata, Febroary 9, 2016 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Splender dia nandinika fifanakalozana efatra tapitrisa mahery tamina tranonkala 800+ mba hahitanao ahoana ny fiantsenana an-tserasera amin'ny 2015 raha ampitahaina amin'ny 2014. Ny Andro Thanksgiving no andro fiantsenana fahatelo avo indrindra amin'ny vanim-potoana tamin'ny alàlan'ny solosaina sy ny fitaovana elektronika nitarika fanomezana fa ny fitafiana sy kojakoja ilaina amin'ny fitomboana Cyber ​​Monday dia mbola ny andro fiantsenana fialantsasatra lehibe indrindra amin'ny Internet, miaraka amin'ny 6% amin'ny varotra fialantsasatra. Na izany aza, nidina 14% ny varotra nanomboka tamin'ny 2014.
Raha ny fahitako azy, misy vitsivitsy ny fitaterana entana eto:
Planning - Ireo mpivarotra dia manaparitaka ny fomba fividianany ary mety tsy manenjika ny laharana amin'ny zoma mainty ho an'ny fifanarahana. Ny mpivarotra sy ny tranokala e-varotra dia tokony hijery ny fanaparitahana ny fanatiny mandritra ny vanim-potoana mialoha ny Krismasy.
fandrindrana - Ny fandrindrana ny varotra an-tserasera sy amin'ny antsinjarany, ny fandefasana, ny pickup ary ny fiverenana amin'ny vanim-potoana fialantsasatra dia mety hitarika fivarotana an-tserasera na fitsimponana fivarotana betsaka kokoa. Raha fantatry ny mpanjifa fa mora izany ary afaka matoky ny faharetan'ny fanaterana izy ireo, dia hanao izany izy ireo. Tamin'ity taona ity tafintohina amin'ny FedEx mety nandratra izany fatokisana izany.
Marketing - izy roa ireo dia mila varotra matanjaka amin'ny taona 2016. Raha tokony hifantoka amin'ny fanapoahana brochure sy flyers varotra ireo dia mino aho fa ny mpivarotra lehibe dia hanampy ny mpanjifany sy ny vinavinany handrafitra ny vanim-potoana, hahita ny fifanarahana tsara indrindra, hanampy azy ireo handrindra ny fandoavana azy ireo, ary miantoka ny fandefasana ara-potoana azy ireo.
Ireo mpivarotra dia tokony mialoha ny drafitra omena fotoana sy efitrano malalaka hivoahana amin'ny vanim-potoana. Raha tsy manana paikady ianao amin'ny faran'ny fahavaratra amin'ny fomba hanavahanao ny fivarotana fialan-tsasatrao amin'ireo mpifaninana aminao, dia mety tara loatra ianao amin'ny lalao. Ny tanjonao amin'izao fotoana izao tokony hitohy fahazoana ireo mpamaky sy fisintoman'ny fampiharana mba hanananao mpihaino marobe kokoa hamidy raha vao manomboka ny vanim-potoana. Amin'ny volana Mey, tokony hanana paikady napetraka ianao amin'ny vanim-potoana.
Ity infographic ity dia natolotry ny Splender, ny mpamatsy lehibe indrindra ny programa momba ny tsy fivadihana miorina amin'ny orinasa any Etazonia.
Tags: 2014 mifanohitra amin'ny 20152015Krismasycyber mondaysary fialantsasatrafironana fivarotana fialantsasatrafironana fialantsasatrasplenderfisaorana
MainWP: Tantano afovoany ireo tranokalanao WordPress